Maninona no mifidy anay | BAODING YINGTESHENG BRISTLE SY BRUSH MAKING CO., LTD
Ny YTS dia manana fitaovana mazàna maherin'ny 100 setroka fanamboarana sy fanandramana mandeha ho azy, izay afaka manatsara ny fahaizan'ny famokarana YTS. Mandritra izany fotoana izany, ny YTS dia nanamboatra milina fanamboarana ferrule mandeha ho azy sy fampiharana hafa mifanaraka amin'ny toetrany manokana. Ny fitaovana famokarana mandeha ho azy dia tsy mitovy amin'ny hafa ao amin'ny indostria. Ho fanampin'izay, afaka mifehy bebe kokoa amin'ny fotoana fandefasana ny vokatra (ETD & ETA) izahay. Ankehitriny ny YTS dia manana famokarana borosy 50 tapitrisa, horonana 30 tapitrisa ary fitaovana maherin'ny 3000 taonina.
ASA FANAMARIHANA ANTSIKA
YTS dia manana atrikasa famokarana mpiasa maherin'ny 150 ary samy nahatsapa ny asa famokarana semi-automatique sy automatique tanteraka isika rehetra. Ny famolavolana ny toeram-piasana dia mirindra sy mitombina. Tsotra sy manan-tsaina ireo fitaovana famokarana, izay mora alain'ny mpiasa. Ny mpiasa an-tserasera rehetra dia manana fiofanana arak'asa ary manaraka tsara ny fizotran'ny dingana sy ny kalitao. Ny rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny YTS dia mandritra ny dingana manontolo manomboka amin'ny akora ram hatramin'ny famaranana vokatra. Mampihatra fanaraha-maso santionany 20% sy fanaraha-maso feno 100% izahay rehefa vita ny vokatra rehetra.
Ny laboratoara anay dia ampiasaina hitsapana ny borosinay sy hahitana fomba hanatsarana azy. Betsaka ny fanandramana feno ataonay alohan'ny hamarotantsika ny borosinay amin'ny tsena, novolavolaina amin'ity laboratoara ity ihany koa ireo vokatra vaovao.